AUN :Saynisyahankii hubka Nukliyeerka ee Pakistan oo geeriyooday -
HomeWararkaAUN :Saynisyahankii hubka Nukliyeerka ee Pakistan oo geeriyooday
AUN :Saynisyahankii hubka Nukliyeerka ee Pakistan oo geeriyooday
Telefishinka Qaranka Pakistan ee PTV ayaa saaka baahiyay in uu Saynisyahanka Nukliyeerka Pakistan uu geeriyooday, xilli loo wareejiyey Isbitaal kale sababo la xiriira dhibaayooyonka dhanka Sambabada (Lung problems).
R/Wasaraha Pakistan, Imran Khan waxa uu sheegay inay Dr. C/qaadir Khan aad loo jeclaa, maadaama uu door muhiim ah ka qaatay sidii uu dalka Pakistan u noqon lahaa dal haysta Hubka Nukliyeerka iyo isagoo noqday Halyeey Qaran oo Tusaale muhiim u ah dadka iyo dalalka islaamka gaar ahaan pakistan.
Sidoo kale Madaxweynaha Pakistan Arif Alvi ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay igeerida Dr Abdul Qadeer Khan oo uu si shaqsi ah u yaqaanay tan iyo 1982 -kii.
Dhanka kale Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Sheikh Rashid Ahmad ayaa bartiisa Twitter -ka ku sheegay in kulan degdeg ah la isugu yeeray madaxda sare ee dalka Pakistan si loo dhammeeyo qabanqaabada xafladda aaska.
Madaxweynaha Pakistan Arif Alvi ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay igeerida Dr Abdul Qadeer Khan oo uu si shaqsi ah u yaqaanay tan iyo 1982 -kii.
Sida ay Wararar ay sheegayaan in Marxuumka laga daaweeyey Xanuunka COVID-19, kana soo bogsaday.